Ny toeram-pambolena rivotra lehibe indrindra any Espana dia any Andévalo (Huelva) | Fanavaozana maintso
1 Aiza ny Andévalo?
Raha fintinina, ny 292 MW voalaza etsy ambony, izay mamela ny famokarana herinaratra isan-taona an'ity zavamaniry midadasika ity hamatsy trano 140.000 ary isaina fa misoroka ny famoahana azy amin'ny atmosfera 510.000 taonina ny CO2.
Tamin'ny Febroary 2010 izy io rehefa Iberdrola Renovales naka ny fananana ilay faritra manontolo. Ny toeram-piompiana rivotra Los Lirios no farany azony, tao anatin'ny fifanarahana fividianana sy fivarotana ho an'ny fiompiana rivotra any Andalusia izay nosoniavina tamin'i Gamesa. Ny hetsika, izay ao anatin'ny fifanarahana nosoniavin'ireo orinasa roa ireo tamin'ny taona 2005 momba ny fivarotana fiompiana rivotra any Andalusia. Ny vidiny farany dia nihoatra ny 320 tapitrisa euro.
Raha ny marina, araka ny nomarihinay teo aloha, ny valan-javaboary iray manontolo dia namboarina miaraka Teknolojia Gamesa, mampiasa maodely turbine roa, ny G90 sy ny G58, izay manome 2 MW sy 0,85 MW ny herin'ny tarika tsirairay avy.
Mba hamindrana ny angovo avy any El Andévalo, Iberdrola Ingeniería y Construcción dia namela tsipika vaovao 120 kilometatra ny halaviran'ny Red Eléctrica de España izay mampitohy an'i Puebla de Guzmán sy ny tanànan'i Guillena Sevillian. Ankoatr'izay, ny drafitra tany am-boalohany dia nieritreritra ny fananganana tsipika faharoa izay hampifandray an'i Puebla de Guzmán amin'i Portugal, izay manana ny maha zava-dehibe ny valan-javaboary ihany koa.
Miaraka amin'ny fananganana ity toerana midadasika ity, 50 vaovao asa mivantana natokana ho an'ny fandidiana sy ny fikojakojana ireo valan-javaboary, ho fanampin'ny mpiasa 400 hafa izay niditra an-tsehatra nandritra ny dingan'ny zaridaina samihafa
Na dia efa voamarika aza ny fametrahana miasa ampahany hatramin'ny 2010, notokanana tamin'ny volana martsa 2011 ilay kompania niaraka tamin'ny fanatrehan'ny filohan'ny Junta de Andalucia, José Antonio Griñán, sy Iberdrola Renovables, Ignacio Galán. Tsy lazaina intsony fa ity be pitsiny ity no manome anjara biriky lehibe indrindra amin'ny angovo angovo any amin'ny faritanin'i Huelva, manokana, ny 292 amin'ny herin'aratra 383,8 MV ao amin'ny faritany.
Ary ny masoivohon'ny angovo Andalusia dia nanombatombana 11,5 isan-jato ny fandraisana anjaran'i Huelva amin'ny herin'ny rivotra avy amin'ny fiarahamonina mizaka tena, izay ao anatin'ny Espana no iray no nitombo indrindra tao amin'ity sehatry ny fanavaozana ity tao anatin'ny dimy taona lasa. Ny herin'ny rivotra rehetra ao Huelva dia ampiasaina hamatsy trano 164.000 isan-taona.
Iberdrola Renovables Energía dia lohan'ny orinasa ao amin'ny Iberdrola Group miaraka amin'ny birao voasoratra anarana any Espana, izay manatanteraka hetsika libéraliseran'ny famokarana herinaratra sy ny fanaovana varotra angovo herinaratra amin'ny alàlan'ny loharanon'angovo azo havaozina ary, vokatr'izany, dia mikendry ny hanao karazana hetsika, asa ary serivisy mifandraika amin'ny asa famokarana sy fivarotana herinaratra amin'ny alàlan'ny fampitaovana izay mampiasa loharanom-baovao angovo azo havaozina.
Ireo dia mety ho herinaratra, rivotra, thermosolar, photovoltaic, na avy amin'ny biomassa; famokarana, fitsaboana ary fivarotana ny biofuel sy ny vokatra azo; sy ny tetikasa, ny injeniera, ny fampandrosoana, ny fananganana, ny asa, ny fikojakojana ary ny fanariana ireo fotodrafitrasa voalaza etsy ambony, na an'ny na antoko fahatelo, ny serivisy fandinihana, ny fanadihadiana momba ny injeniera na ny angovo, ny fikajiana tontolo iainana, ny teknika ary ny toekarena, mifandraika amin'ireo karazana fotodrafitrasa voalaza ireo .
Ireo hetsika voalaza etsy ambony ireo dia tanterahina ifotony any Espana sy amin'ny faritra jeografika izay manitatra hatrany Portugal, Italia, Gresy, Romania, Hongria ary amin'ny firenena hafa, ary izy ireo dia tanterahina mivantana, amin'ny ampahany na amin'ny alàlan'ny fananana fizarana, fandraisana anjara, quota na faritra mitovy amin'izany amin'ny orinasa na orinasa hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Ny toeram-pambolena rivotra lehibe indrindra any Espana dia any El Andévalo (Huelva)